Momba ilay mpanorina - Chengdu Xinzi Rain Clothing CO., Ltd.
Momba ny mpanorina
Tiany foana ny kiraro, ary manantena izy fa ny vehivavy rehetra dia afaka manao kiraro avo mifanentana amin'ny tenany sy manome tanjaka bebe kokoa. Nanangana marika famoronana kiraro tsy miankina tamin'ny taona 1998, nifantoka indrindra tamin'ny fikarohana ny fomba hanaovana kiraro vehivavy maoderina milamina sy lamaody. Ary efa nanandrana nanapaka ny fahazarana sy ny famaritana indray. Tsy asa sarotra intsony ny fahazoana vehivavy manao kiraro avo. Ary mitafy ny kiraro avo tsy voarindra, mankanesa any amin'ny toerana tian'izy ireo haleha.
Na izany aza, taona maro niainany nandritra ny lamaody dia namela azy faniriana mafy ny hahafoanan'ny vehivavy ny fanaon'izy ireo manokana, nihevitra ny foto-kevitra "Designed For Oneself" mihitsy aza izy mba hahatsapany fa mendrika ny atin'akanjo manokana ananany ny vehivavy tsirairay. Feno heriny, mahaliana, manintona izy io, endrika iray hafa amin'ny hatsaran'ny vehivavy izany.
Nino foana izy fa ny fanaovana firaisana ara-nofo dia tsy hoe fanaovana sitraka amin'ny hafa fotsiny, fa momba ny fahalalahana koa. Nanomboka namorona marika manokana izy tamin'ny 2004, ary amin'ity fomba ity dia hisy andraikitra tsy miovaova, iraka hitondra sy handeha lavitra, fahitana ny mpanjifa aloha, ary andraikitra hihaino hatrany sy hihaona amin'ny fitakian'ny mpanjifa. Ny marika dia nandalo 17 taona teo ambany fitarihany.
Taorian'ny fikarohana sy fanandramana mitohy dia nahazo fankasitrahana sy fiderana avy amin'ny mpanjifa amin'ireto karazana manaraka ireto, toa ny Sexy Lingerie, Sportswear, ary Seamless Bra & Brief Sets. Amin'ny finoany, ny vehivavy rehetra, na inona na inona taonany, asany ary endriny, dia mendrika ny atin'akanjo azy manokana izy ireo.
Xinzi Rain dia nahavita fahombiazana lehibe noho ny traikefa anaovany faran'izay mahazo aina sy ny endrika lamaody. Nanomboka nivezivezy ihany koa ny lazany, ary tian'ireo vehivavy mahaleo tena maro izy io.
Ny nofinofy farany dia ny hitondra hery ho an'ny vehivavy rehetra izay manao ny atin'akanjo azy avy any Xinzi Yu, mba hamakivaky hatrany sy hanova ny fahefany manokana, hamenoana ny nofinofin'izy ireo amin'ity hery ity, ary handroso ara-dalàna sy am-pitiavana ...